Xafiiska Puntland – Page 2
DAAWO:- Laba katirsan Alshabaab oo maanta markale lagu riday xukuo dil ah “Dambiyada ay galeen wax ka ogoow”.
May 20, 2019 Xafiiska Puntland 2
Maxkamadda Sare Ee Ciidamada Qalabka ee gobolka Banaadir ayaa Xukun dil ah ku riday Laba nin oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin Maleeshiyada Alshabaab Labadan oo kale ah Canshuur Cusmaan Abuukar Cumar (Asad) iyo
Wararka ka imaanaya deegaanada Somaliland ayaa waxay sheegayaan in wali halkaasi ay ka da’ayaan roobab baaxad leh kuwaas oo gaystay khasaare kala duwan. Roobabkii ugu dambeeyay ee da’ay ayaa waxay sababeen in daadad ay ku
May 20, 2019 Xafiiska Puntland 14
Gdoomiyaha guddiga Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliima yareey oo shalay kahadlaysay arimo kusaabsan doorashooyinka la filayo dhawaan in ay ka dhacaan dalka ayay sheegtay in doorashada dhici doonta sanadka 2021 ay ka qayb galayso Somaliland
Degdeg:- Wasiir goodax Barre oo Qaab kale ufasiray hadalkii gafka ahaa ee uu shalay kula kacay Puntland “Website baa iqalday”.
May 19, 2019 Xafiiska Puntland 12
Xafiiska Wasiirka Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre cudur-daar ayuu bixiyey, sababta hadalkii waalida ahaa ku kalifeyna waxa uu sheegay in uu dhibbane (victim) u noqday Fakenews gaar ahaan nooca loo yaqaan Clickbait ee cinwaanka iyo warku
May 19, 2019 Xafiiska Puntland 6
Waxaa maanta ka bilowdey gobolada Dowladda Puntland ee Soomaaliya Imtixaankii shahaadiga ah oo ay ardey ka badan 15 000 u fariisteen, Imtixaanka waxaa furay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni), ma ahan markii u horeysey
May 19, 2019 Xafiiska Puntland 1
Madaxweynahaa Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo wefti balaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaaladda Galkacayo ee gobolka Mudugu, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho toddobaad qaadanaysa. Weftiga Madaxweynaha ayaa intaanay soo
May 19, 2019 Xafiiska Puntland 0
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Soomaaliya ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bare oo shalay gaaray Jowhar ayaa sheegay in uu fashilmay Imtixaankii Puntland oo shalay si rasmiya loo daahfuray, Wasiirka oo difaacaya Fashil hareeyay
Deg-deg Daawo:- Degmada Taleex oo lagu gubay Calanka Somaliland iyo Xuska 18ka May oo si nabad ah udhacday “Saraakiil katirsan Puntland…”.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 7
Magaalada Taariikhiga ah ee Taleex ayaa maanta si aan loo kala hadhin looga xusay maalinta Qashingurka iyo qashin gubka SSC taas oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ciidan oo katirsa Puntland. Boqololaal kamid ah shacabka
SAWIRO:- Ciidamo laga qaaday Tukarraq oo lagu daadiyay goobaha qashin qubka Laascaanood + Cabsi wali kajirta magaalada.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 2
Maamulka Somaliland ayaa Ciidankii ugu badnaa ka daabulay duleedka magaalada Tukaraq ee gobolka Sool kuwaas oo lagu xareeyay ama la geeyay magaalada Laascaanood. Ujeedka ciidamada loo geeyay Laascaanood ayaa lagu sheegay in ay ka hortagayaan
DAAWO:- Shacabka Buuhoodle oo si balaadhan uxusay 18ka May maalinta Qashinka gurka SSC + Calanka Somaliland oo dab la qabadsiiyay..
Shacab waynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ceyn ayaa maanta si balaadhan uxusay maalinta loo asteeyay maalinta qashin gurka ama Nadaafadda waxaana ka qayb galay boqolaal shacab ah iyo masuuliyiin katirsan Maamulka Khaatuma.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 1
Wararka haatan kusoo dhacaya warqabadka Marqaannews ee ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in xiisad kacsanaan ah ay ka jirto Magaalada Laascaanood, taasi oo udhaxeysa Ciidanka Somaliland iyo Dadka magaalada. Sida wararka ay sheegayaan
DAAWO:- Gobolada Somaliland oo ka bilaawday Mashruuc shacabka loogu qaybinayo Calanka Somalia ”Kacdoon dadban…”.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 5
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo qaar badan oo kamid ah gobollada Somaliland waxaa socda oo bilaawday olole balaadhan oo aan la ogayn cidda wada balse ah mid shacabka looga dhaadhicinayo ka tanaazulka fikirka qaldan
Daawo:- Diyaaradaha Sucuudiga oo Xasuuq arxan darro ah ugaystay Somali ku noolayd Dalka Yaman ”Dhaawacyo argagax leh”.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 0
Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR waxay sheegtay inay aad uga tiiraanyeysan yihiin khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray Duqeymihii ay Diyaaradaha Isbahaysiga Sacuudiga Khamiistii la soo dhafaay ka geysteen caasimadda dalkaasi ee
May 18, 2019 Xafiiska Puntland 4
Qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka beelaha dega gobolka Banaadir oo kulan balaaran isugu yimid ayaa si kulul u cambaareeyay xernaanshaha wadooyinka Muqdisho. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa waxa ay sheegeen in Muqdisho ay go’doon kujirto
Daawo:- 16kun oo Arday ah oo maanta Puntland uga fariisatay Imtixaanaadka Shahaadiga ee dugsiyada sare iyo Dhexe.
Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa furay Imtixaanka Shahaadiga ee dugsiyada Sare iyo dhexe ee Puntland. Ku dhawaad 16,000 oo arday ayaa u faristay imtixaankan saaka oo sabti ah, kaaasoo ka dhacaya dhammaan